Akajairika Simba Mawiricheya - Magetsi Kufambisa
Kana zvasvika pakutenga simba wiricheya, unofanirwa kuziva nezve musika wauri. Simba mavhiripu iwo akasiyana akasiyana ballgame pane echinyorwa mavhiripu.
Kwete chete izvo zvinodhura zvakanyanya, iwo maficha avakashongedzerwa akasiyana zvakanyanya pane izvo iwe zvaungave wakajaira kuona.
Mhando dzePowered Chairs
Ruzhinji rwesimba mavhiripu inofambiswa nerubatsiro rwemota yemagetsi. Kazhinji yenguva, simba wiricheya ichave nemufaro wemagetsi kana kure kure iyo inoshandiswa seyekutanga mudziyo kufambisa iyo wiricheya.
Iyo joystick inoshandiswa kudzora iko kunonoka uye kumhanya kwechigaro sezvo kazhinji yenguva zvigaro izvi zvinorema zvakanyanya kuti chero munhu aite zvekumanikidza kusundira.
Dzimwe dzinofambiswa mavhiripu zvakagadzirwa zvakasiyana nezvimwe. Mamwe macheya ane chimiro chakasiyana pane chiyero.
Mavhiri uye Quality
Aya magadzirirwo anogona kuratidza matatu mavhiri kusvika kumatanhatu mavhiri. Yemhando yega yega yakawedzera kana kushomeka yakagadzirirwa humwe hunyanzvi saka ita shuwa yekuziva izvo zvaunoda usati watenga imwe.
Chinhu chakakosha kwazvo kutsvaga kana uchitsvaga yakapihwa simba wiricheya is Quality. Kana iwe uchizenge uri kushandisa iyo yakakosha huwandu hwemari pane chimwe chinhu, iwe ungangoda kuve nechokwadi chezvinhu zviviri. Imwe, yaive yakagadzirwa nehanya uye mbiri, yakavakirwa kuti igare.
Zvimwe zvakakosha zvaungade kutsvaga musimba wiricheya inosanganisira padded upholstery, Quality armrests, uye hombe nhanho-chubhu yekupedzisira kapu kumashure kwechigaro chekufambisa.
A Quality Powered wiricheya inofanirwa kusanganisira izvi maficha senge asina chete hwaro neimwe nzira haifanire kutariswa se Quality wiricheya.
Magadzirirwo uye Kukodzera
Chinhu chekurangarira ndechekuti wiricheya kudomwa kuchine basa zvakanyanya. Kana iwe waverenga yedu imwe chinyorwa nezve yakakodzera bhuku mavhiripu, ipapo iwe unobva wakurangarira izvo pakarepo wiricheya kukodzera kwakakosha kwazvo.
Kuti uve wakasununguka mune chero wiricheya, zvinodikanwa kuti iwe ugone kutenga iyo wiricheya ndiko kukodzera padyo nezviyero zvako.
Mushure mekunge mafunga kuti nderudzii rwe wiricheya kutenga, yekupedzisira nhanho ingangove yekutengesa kutenderera nemutengo wakanakisa.
Vamwe vatengesi vanogona kutengesa zvakafanana zvakafanana wiricheya urikutsvaga zvakanyanya kushoma pane vamwe. Zvinokurudzirwa kushopota uye kutsvaga wakanakisa mutengo waunogona kuwana.
Kutumira mhosva zvakare chimwe chinhu chinganete sezvo ivo vachigona kazhinji kuvanzwa kubva kwauri kusvika iwo chaiwo matanho ekupedzisira ekubuda.